That's so good, right?: June 2013
တောင်ပြုံးရွာလေးရဲ့ နတ် နန်းကြီးဘေးမှာ နတ်ကတော်တွေရဲ့ နတ်တဲတန်းလေးတွေ အစီအရီဆောက်ထားကြတယ်။ အဲဒီ့ တဲတန်းလေးတွေပေါ်မှာတော့ နတ်ကတော်မိန်းမ လျာတွေ ကိုယ့်အစုနဲ့ကိုယ် ထိုင်ရင်းစကားစမြည် ပြောလိုက်၊ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကောင်လေးတွေကို လှမ်းစလိုက်၊ သဘောကျတာ တစ်ခုခုတွေ့ရင် မိန်းမလျာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ဝါးချင်း“ဖြောင်း”ဆို ရိုက်လိုက်နဲ့ ရယ်ကာမောကာ ပျော်ရွှင်နေကြတယ်။
““အဲဒီလို ပျော်ဖို့ရွှင်ဖို့အတွက် ရော ကိုယ့်ရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အရပါ နှစ်တိုင်း တောင်ပြုံးကို အရောက်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းနှစ် ဆယ်ကျော်ပြီ””လို့ နတ်ကတော်မိန်းမလျာမိသောင်းကပြောတယ်။ နတ်ကတော်မိန်းမလျာတွေဟာ တောင်ပြုံးပွဲတော်ကိုလာရတာ အရမ်းပျော်ကြတယ်လို့ မိသောင်း ကဆိုတယ်။
ဘာလို့ ပျော်ကြတာလဲလို့ မေးတော့ မိန်းမလျာတွေက လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားထဲမှာ တသီးတခြား ဖြစ်နေလေ့ရှိတယ်၊ လူတွေက မိန်းမလျာတွေဟာ ရွံ စရာကြီးလှောင်စရာလူကြီးလို့ပဲ မြင်ကြတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဘ၀တူမိန်းမလျာတွေ ဒီတောင်ပြုံးပွဲမှာ ဆုံကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စဟယ်နောက်ဟယ်နဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ သူ့ဘ၀ အားပေးရင်း ပျော်ကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။
မိသောင်းက စကားပြော ရင်း ဆေးပြင်းလိပ်တစ်လိပ်ကို ကောက်ပြီး ပါးစပ်မှာတပ်ကာ မီး ညှိလိုက်တယ်။ ဆေးပြင်းလိပ်ကို တစ်ချက်ဖွာလိုက်ရင်း မိသောင်း ကစကားကိုဆက်တယ်။ ““ကျွန်တော် ကံကံ၏အကျိုးကို အရမ်းကိုယုံကြည်တယ်။ ဒီဘ၀ကို ရလာတာ အရင်ဘ၀က ကာမေသုမိစာစာရကံကျူးလွန်ခဲ့လို့ဒီဘ၀ရောက်ရတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဝဋ်ကြေွးကို ဒီဘ၀နဲ့ပဲ ကျေစေ ချင်တယ်။ နောက်ဘ၀ အပါမခံ ချင်တော့ဘူး””လို့ဆိုတယ်။
ခပ်ငယ်ငယ်အရွယ်တုန်းက တော့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာ မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ့်ကို ပစ်သွားတဲ့ ကောင်လေးနောက်ကို ဓားတစ် ချောင်းယူပြီးလည်း လိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ်နဲ့တွဲနေတဲ့ကောင် လေးက မိန်းကလေးနဲ့ဖြစ်နေလို့ သူတို့နှစ်ယောက် ချိန်းတွေ့တဲ့နေ ရာကိုလိုက်ပြီး ဆဲနည်းမျိုးစုံဆဲ ကာ အရှက်လည်း ခွဲခဲ့ဖူးတယ်လို့ မိသောင်းကပြောတယ်။
မိန်းမလျာတန်မဲ့ အရက်ပုလင်းခါးကြားထိုးကာ အရပ်တကာ လျှောက်သွားပြီး အသည်းကွဲတာကို မေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်လို့ ပြောပြရင်း မိသောင်း မျက်ရည် ၀ဲနေတယ်။
““အဲဒါတွေ ဖြစ်ခဲ့တုန်းကဆို ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို မီးစကြီးနဲ့ထိုးနေ သလိုကို အရမ်းပူလောင်ခဲ့တာ၊ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ကိုယ် လုပ်ရပ်မှန်တယ်လို့ ထင်ခဲ့လို့ မှား ခဲ့တာပေါ့။ ခုချိန်မှာတော့ အရာ ရာအားလုံးဟာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကံတွေ အကျိုးပေးတာပဲလို့ ယူဆ ပြီး ဖြေနိုင်အောင်ဖြေတယ်””လို့ ပြောပြတယ်။
ယောက်ျားချင်း တပ်မက်နေ ရတဲ့ဘ၀က တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဘ၀တစ်ခုပါလို့ ဘေးနားမှာ ထိုင် နေတဲ့မိန်းမလျာ အမေမိုး ခေါ် ကိုမိုးအောင်က ၀င်ပြောတယ်။
““ဘ၀မှာ အဆိုးဆုံးအချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ခြောက်နှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ကောင်လေးက မိန်းမခိုးပြေးတဲ့အခါ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဗြောင်းဆန် သွားတယ်။ ဒါနဲ့ သိသိချင်း ဘာ လုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဘူး။ သူတို့ပြေးတဲ့နောက်ကို တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက်လိုက်တယ်။ သူတို့ ကလည်း သူတို့ချစ်ခြင်းခွဲမယ်ထင် တာနဲ့ ပတ်ရှောင်ကြတာ။ နောက်
ဆုံး ကျွန်တော်က အော်ပြောတာပေါ့။ ဟဲ့ ငထွန်းနဲ့ မိအေးရေ နင်တို့ကို ခွဲဖို့ လိုက်လာတာမဟုတ် ပါဘူးဟယ် နင်တို့ကို ပေးစားမှာပါ။ငါ့ကို နင်တို့ ခိုင်းချင်ရာ ခိုင်း၊ နင်တို့နဲ့ နေချင်လို့ပါလို့ဆိုပြီးပြော ပြမှထွက်လာတယ်””လို့ အမေမိုး ကပြောပြတယ်။
မိန်းမလျာကို ကောင်လေး က ပစ်သွားတာ မဆန်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိန်းမလျာဘ၀ ဆိုတာ ထောက်ခံစာနဲ့တူတယ် လို့ ပြောလာသူက မော်လမြိုင်မြို့ က လာတဲ့ နတ်ကတော်စံစံပါ။
“အစ်ကို့ကိုမေးမယ်၊ မှတ်ပုံတင်နဲ့ ထောက်ခံစာ ဘယ်ဟာ အရေး ကြီးလဲ၊ မှတ်ပုံတင်က အရေးကြီး တယ်လို့ပဲ အစ်ကိုကဖြေမှာပဲလေ။ မှတ်ပုံတင်မရခင်စပ်ကြားမှာပဲ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ဆဲ ထောက်ခံစာ က အရေးပါတာကိုး။ မှတ်ပုံတင် ရရင် ထောက်ခံစာက ဘယ်လို လုပ် လိုတော့မလဲလေ။ မိန်းမလျာ တွေအတွက်တော့ ယောက်ျားက ပစ်ခံရတာ မဆန်းတော့ပါဘူး”လို့ ပြောပြတယ်။
““ကျွန်တော် ဘွဲ့ရပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘ၀ကို အကောင်း ဆုံး တည်ဆောက်နေပါတယ်။ မိန်းမလျာမို့ သူတစ်ပါး အထင်သေးခံရတာကို လုံးဝမဖြစ်ရအောင် ကြိုးစားတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်း တယ်။ ပန်းအလှပြင်တယ်။ ဆယ့် နှစ်ရာသီပတ်လုံး အလုပ်နဲ့ လက် မပြတ်အောင်လုပ်တယ်။ ရလာ တဲ့ငွေနဲ့ မိသားစု တင့်တင့်တယ် တယ်ထားတယ်။ ညီတွေ ညီမတွေ ပညာတတ်အောင် လုပ်ပေးတယ်။ နောက်ပြီး လှူရေးတန်းရေးမှာ သူများ တစ်ထောင်လှူရင် ကိုယ် နှစ်ထောင်လှူနိုင်အောင် ကြိုးစား တယ်။ ဒီဘ၀လို အဖြစ်ဆိုးမျိုး နောက်ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ချင် တော့ဘူး””လို့ ဆက်လက်ရင်ဖွင့်ပါတယ်။
မိန်းမလျာတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀က အရမ်းဆိုးလွန်းလို့ ဘာကို စပြောရမှန်းတောင် မသိဘူးလို့ ပြောရင်း မဲ့ပြုံး ပြုံးလာသူက ကိုမောင်မြင့်ပါ။ အများကတော့ သူ့ကို အမြင့်လို့ခေါ်ကြတယ်။ သူက မိတ်ကပ်ပြင်တယ်။ သူ့ဘ၀ မှာ အကြိမ်အခါခါ အသုံးချခံ လိုက်ရပြီး တစ်ကြိမ်ကတော့ တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးကို အသုံးချခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောပြ တယ်။
““ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကိုယ် ဆင်ပေး ထားတဲ့လက်ဝတ်လက် စားတွေရော ဖုန်းရော ငွေသိန်းနှစ် ဆယ်ကျော်ရော ယူပြီး ရှောင် ထွက်သွားတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်း လေး အောင်မြင်ခါနီးအချိန်မှာ လုံးဝကို ခါးပြတ်သွားတာ။ မနည်း ရုန်းကန်လိုက်ရတယ်။ ခုလို အခြေ အနေဖြစ်ဖို့ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရင်း အလုပ်တွေပို ကြိုး စားရင်း နာမည်တစ်လုံး ပြန်ရ အောင် တော်တော်လေးကို လုပ် ယူလိုက်ရတယ်။ ခုတော့ ကိုယ့်ဝင် ငွေအားလုံးသည် မိဘနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက်ပဲ။ ကျန်တာဘာမှကို မစဉ်းစားရဲ တော့ဘူး””လို့ ယောက်ျားတွေကို ကြောက် သွားတဲ့ အမြင့်ကပြောပါတယ်။
မိန်းမလျာတွေဟာ မိဘနဲ့ မိသားစုအပေါ် အလွန်ပဲ တွယ် တာလှပြီး လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးချင် စိတ်ရှိကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မလိမ္မာတဲ့ မိန်းမလျာတွေ လည်း ရှိကြပါတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး မိန်းမလျာတွေဟာ ပုံမှန်လူတွေ ထက် နှစ်ဆပိုကြိုးစားရပါတယ်။ သူတစ်ပါး အထင်သေးခံ၊ အလှောင်ခံဘ၀ကနေ ဘ၀တစ်ခုရဖို့ ကြိုးစား
ရတာ တော်ရုံစိတ်ဓာတ်နဲ့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့တတွေနဲ့ စကားပြောရရင် ရယ်ရ တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါလည်းမှန်တာပါပဲ။ ကိုယ့်အားနည်း ချက်ကြီးကို မေ့ထားဖို့ဆိုတာ ပျော်ပျော်နေမှသာ နေလို့ထိုင်လို့ရမှာဆိုတော့ ပျော်ပျော်နေရင်း ရယ်စရာစကားတွေ ပြောတတ်လာကြတာပါတဲ့လေ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပျော်ရုံ
ပဲပျော်ပြီး မိမိဘ၀ပါးမသွားအောင်တော့ နေထိုင်သင့်တယ်လို့ အသက်အရွယ်ရနေတဲ့ မိန်းမလျာကြီးတွေက အ တွေ့အကြုံတွေအရအငယ်တွေ ကို သြ၀ါဒခြွေပါတယ်။
““ခုခေတ် နောက်ပေါက် မိန်းမလျာလေးတွေ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ဖို့၊ အပျော်အပါးမမက်ဖို့ ကြုံတိုင်းပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေ မဲ့ ကိုယ့်ကွယ်ရာမှာ ဘယ်လို နေမလဲဆိုတာ ဘယ်သိနိုင်မလဲ။ ကျန်းမာရေးအသိလေးနဲ့ နေဖို့က တော့ အမြဲမှာပါတယ်။ မိမိကံ အကျိုးပေးကို လက်ခံဖို့၊ နောက် ထပ် ထပ်မမှားဖို့ အမြဲပြောဖြစ် ပါတယ်””ဟု အသက် ၆၈ နှစ်အ ရွယ် နတ်ကတော်မိန်းမလျာဆိတ် ဆိတ်ကပြောပြတယ်။
““ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ယောက်ျားတွေက ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတာတွေက နည်းနည်း၊ ဆိုးတာကများများပါ။ ယောက်ျားချင်းတူတာတောင်မှ သူထိုးတာ ခံရ၊ နှိပ်စက်တာခံရနဲ့ ဘ၀က ငရဲကျသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ခုတော့နေတတ်အောင်နေတယ်၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၀ိပဿနာ တရားခွေတွေနာတယ်။ တရားထိုင်တယ်။ ကိုယ့်ဘ၀က ခုတော့ ဘုရားတရားကြောင့် တော်တော်လေးကို အေးချမ်းနေပါပြီ””လို့ မိန်းမလျာကြီးတစ်ယောက်က သံဝေဂသံအပြည့်နဲ့ ပြောပါတယ်။
မိန်းမလျာအားလုံးကိုနောက်ဘ၀ ယောက်ျားဖြစ်ချင် သလား၊ မိန်းမဖြစ်ချင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီမိန်းမလျာဘ၀ပဲ ထပ်ဖြစ်ချင်လားလို့ မေးတော့ မိန်းမလျာဘ၀ဟာ လိုချင်လို့ရခဲ့ တာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ကံ ကံ၏ အကျိုးကို လုံးဝယုံကြည်ကြောင်း၊ နောက်ဘ၀ ယောက်ျားစစ်စစ်သာ ဖြစ်ပါရစေလို့ အမြဲဆုတောင်း ကြောင်း ဆိုကြပါတယ်။
သူတို့ပြောသမျှ မှတ်တမ်း တင်နေတဲ့ အသံဖမ်းစက်ခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်တော့ မိန်းမလျာတွေ အားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာ အပြုံးလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ သူတို့ ရင်ထဲက စကားတွေ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပြောပြလိုက်ရတဲ့အတွက် သူတို့ရင်တွေအနည်းငယ် ပေါ့သွားပုံရပါတယ်။
နောင်ဘ၀ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် သူတို့အားလုံး ဆုတောင်းကြသလို ယောက်ျားစင်စစ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
Credit: ညီညီဇော် ရေးသားပြီး 7day news journal အတွဲ (၁၀)၊ အမှတ်(၂၂)မှ
Post Copy From www.mlgbts.com
Posted by Alex Aung at 11:49 PM No comments:
The Gardener's Boy
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အဖြစ် ဥယျာဉ်မှူးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥယျာဉ်ကြီးဆိုလို့ ပန်းမျိုးစုံကို ခေတ်မှီနည်းစနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့ခြံကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုပြောချင်တာပါဗျ။
ဒီဥယျာဉ်ကြီးကို တောင်လှေကား မြို့လေးရဲ့ တောင်ခါးပန်းစောင်းမှာ တစ်မျှော်တစ်ခေါ်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းရောင်စုံတန်းတွေကို အကန့်လိုက်အကန့်လိုက်တန်းစီပြီးမြင် နေရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
အိမ်မှာခြေမွှေးမီးမလောင်နေခဲ့ရသူက ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတော့ ဖေဖေတို့များသိရင် ရယ်နေမလားဘဲ။ အိမ်က အစ်မဖြစ်သူနဲ့ စိတ်ဆိုးပြီး ကိုယ့်ခြေပေါ်ကိုယ်ရပ်မယ် ဆိုပြီး အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတာလေ။ ဒီမြို့လေးရောက်တော့ သူငယ်ချင်းကတစ်ဆင့် 'မြိုင်ဟေ၀န်' ပန်းခြံကြီး ဆီရောက်လာရတာ။ ပန်းခြံကြီးက ခေတ်မှီနည်းစနစ်ကျစွာ စိုက်ပျိုးသလို ခြံကြီးရှေ့ဘက်မှာ ပန်းတွေကို နယ်ဝေးရော အနီးမြို့များ အ တွက်ပါ ထုပ်ပိုးရောင်းချတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးကလည်းဟိန်းလို့။
ပိုင်ရှင် အန်ကယ်ကြီးက ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရင်အောက်ခြေက စသိရမယ်၊ ပြီးတော့ ပန်းတစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာသိဖို့ ဆိုပြီး ဥယျာဉ်မှူးကြီးဆီ အပ်နှံလိုက်ပါရော။ စစချင်းတော့ ထမင်းကျွေး၊ နေစရာပေး မုန့်ဖိုးအနည်းအကျဉ်းရသပေါ့။ ဥယျာဉ်မှူးကြီးက ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးမှုအတတ်ကို ကောင်းကောင်းမောင်းတော့တာ။ အစပိုင်းမှာတော့ ပျိုးပင်လေးတွေကို ပျိုးဘောင်ကနေ ပန်းအိုးသေးသေး လေးတွေထဲ ဘယ်လိုခွဲထည့်၊ မြေဆွေးဘယ်နှစ်ဆ တစ်ခြားအရာ ကိုဘယ်နှစ်ဆထည့် စသဖြင့်လည်းပါသေး။ သဘာဝမြေဆွေးတွေပါ သလို နွားချေးတွေလည်းမြင်ရတော့ ရင်ထဲ ပျို့တောင်တက်မိပါသေးရဲ့။ ဥယျာဉ်မှူးကြီးက စေတနာပါသလို ဟောက်လည်းဟောက်ပါ တယ် သူ့စိတ်တိုင်းမကျတဲ့အခါ။
ဥယျာဉ်မှူးကြီးရဲ့တပည့်ဥယျာဉ်မှူးလေးများကလည်း ဟောက်ချင်စရာကောင်းအောင် ခိုကပ်ကြတယ် တစ်ခါတလေများ။
ပျိုးပင်တွေထားတဲ့ ဘက်အခြမ်းမှာ၊ ပျိုးပင်တွေပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခြမ်းမှာ ကျွန်တော့်လို အကူလုပ်သားတွေ အများအပြားရှိပေမဲ့ ကျွန်တော့်လိုညအိပ်ညနေ မလုပ်ကြပါဘူး။ အဓိက ဥယျာဉ်မှူးလေးတွေက ၁၄ယောက်တောင်ရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ပန်းအမျိုး အစားအလိုက်တာဝန်ယူကြရတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကိုကြီးကြပ်သင်ကြားပေးသူက ကျော်သူရဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးပါ။ လူနဲ့နာမည်နဲ့ လိုက်တယ်ဗျ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အတိအကျ ရဲရဲရင့်ရင့်ပြတ်ပြတ်သားသား။
ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောရင်ရသလို မထူးဆန်းဘူးလည်းပြောလို့ရတာကတော့ အလုပ်သမားအများစုက ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ပြီး အမျိုး သမီးများကိုတော့ ပန်းအရောင်း အဆောက်အဦးနှင့် မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲတွေ့ရတယ်။
အလုပ်တွင်ကျယ်တာပေါ့လို့တွေးမိရပေမဲ့ တစ်ခါ တစ်လေစိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ယောက်ျားလေးချည်းဆိုတော့ စကားပြောတာဆိုတာ နောက်တာတွေက အတားအဆီးမရှိ၊ အနှောင့်အသွား မလွတ်တလွတ်။ အလုပ်အားချိန်ဆို ဟိုစဒီစ ကျွန်တော့်လို အနေအထိုင်အေးသူအတွက် သူတို့ကိုင်တွယ်ပွေ့ဖက်မှုကို ခံရပါသေးရဲ့။
'တင်ပါးတွေက လုံးကျစ်နေတာ စော်ဆိုရင်တော့ကွာ....ဟင်းဟင်း'
တစ်ခြားသူတွေဆို ဒေါဖောင်းပြီး ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်ဖြစ်လောက်ရဲ့။ ကျွန်တော်က စိတ်မတို မတုန့်ပြန်တော့ သူတို့လုပ်တာပြောတာကို သဘောကျလို့ ငြိမ်နေတယ် ထင်ကြဟန်တူပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အံ့သြပါရဲ့ စိတ်မတိုဒေါသမထွက်လို့လေ။ ဘာကြောင့် လည်း မသိပါဘူး....ဟူး။
ပန်းအိုးတွေကို ဒီမှာချ၊ ပျိုးပင်တွေကို ဘယ်လိုသန့်၊ မြေဆွေးတွေကို ဘယ်လိုဖြည့် လုပ်ပြနေတဲ့ ကိုသူရရဲ့ချည်သားဘောင်းဘီခွကြားက ဖုဖုဖောင်းဖောင်းကို သူပြောတဲ့အတိုင်း ပျိုးပင်တွေကို လိုက်လုပ်ရင်း မသိမသာကြည့်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ကြည့်လည်း မမေးနဲ့။ အကုန်း အကွလုပ်ရင်း တစ်ခါတစ်ခါ လျောလျောသွားတဲ့ ဘောင်းဘီကြောင့် ဆီးခုံမွှေးလေးတွေ၊ ပေါင်ကြားက ငထွားရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းရာလေး တွေ မြင်ရသေးတယ်။ လုပ်ရင်းကိုယ်ရင်း ထိမိတိုက်မိတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ပခုံးတွေ ဖမ်းထိန်းပေးချိန် ရင်ခုန်မိသလိုပါပဲ။
တစ်ခါသား ပန်းအိုးတွေသယ်လာပြီး ပျိုးဘောင်နားအောက်ကို အချမှာ ကျွန်တော့်တင်ပါးဆုံတွေကို လှမ်းညှစ်တယ်။ သူ့ရဲ့တကယ့်သန်မာတဲ့လက်တွေနဲ့ ညှစ်တာတကယ်။ သောက်ရမ်းနာတာ အသံထွက်အော်မိရပေါ့။ သူအတော်ကြာမလွှတ်ဘဲကိုင်တွယ်ပြီးဖီးလ်ယူနေတာ။ ကျွန်တော်အတင်းရုန်းမှလွှတ်ပေးတယ်။ နာကျင်မှုလေးပျောက်သွားတော့မှ အထူးအဆန်းကျွန်တော့်ညီဘွားက မာလာတယ်.....ဖီးလ်လာတာများလား။
မတော်တဆလိုလိုနဲ့ ကျွန်တော်ပျိုးပင်ကုန်းကောက်တုန်းပေါ်သွားတဲ့ တောင်ကြားလမ်းကိုလည်း အိုက်စခရင်မ်ကို လျှက်သလို ကလိ သေးတဲ့အခါများ ကြက်သီးတွေတောင် ထမိတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ပြီလား အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တော့ အဲဒါကို ဘယ်လိုခံစားမိခဲ့လည်း သေ ချာမဆန်းစစ်မိရပါ။ မငြင်းဆန်ခဲ့မိဘူးဆိုတော့ သူပြုတဲ့အပြုအမူအပေါ်.....။
ညလေပြည်နဲ့အတူရောပါလာတဲ့ ညမွှေးပန်းအနံ့တွေဟာ ကျွန်တော့်အိပ်စက်ရာ အိမ်ငယ်လေးစီလွင့်မျောလာမြဲ။ ကြယ်တွေတလက် လက်ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို ပြတင်းပေါက်ကနေမြင်နေရတယ်။ အိမ်ကိုလွမ်းသလိုပဲဗျာ...။
ကိုသူရ ညကြီးမိုးချုပ်ရောက်လာတယ်။ လက်ထဲမှာလည်း ဘာတွေမှန်းမသိယူလာတယ်။ စကားပြောကောင်းတဲ့ သူ့စကားလုံးတွေကြား ကျွန်တော်မျောနေတုန်း သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားဆီ တရွေ့ရွေ့။ ဟန်ဆောင်ရုန်းဖြစ်လိုက်ပေမယ့် အတွေ့အကြုံအသစ် အဆန်းကို ရချင်မိတဲ့ ကျွန်တော် ပေါင်ကိုကားပေးလိုက်မိရော။ မျက်ဝန်းခြင်းအငြိ သူ့မျက်ဝန်းမှာ အရောင်တောက်ပမှုတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရသေးပါရဲ့။
'အင်.....ရှီး...အား' ပထမဦးဆုံး အာငွေ့ပေးခြင်းကို ခံယူဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားတန်းကနဲထောင်လာတော့တာပါပဲ။ ထိပ်အရေပြား ကြားထိုးဝင်လာတဲ့ သူ့လျှာနွေးနွေးရဲ့ အတွေ့နှင့် ကွမ်းသီးခေါင်းကို ငုံစုပ်လိုက်တဲ့ အရသာကို အခုထိတမ်းတမ်းစွဲနေရတဲ့အထိကောင်း လှပါရဲ့။ ကျွန်တော့်တင်ပါးစုံကို ကိုင်ပြီး သူ့အစုပ်အမှုတ်လုပ်နေတာ အားရပါးရဖြစ်လှတယ်။ Lollipop ကိုငုံစုပ်နေတဲ့အတိုင်း အားရပါးရ ရှိတာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က မထိန်းနိုင်ဘဲ အသံထွက်ညည်းမိရတဲ့အထိ။ သူ့အတွက် ကျွန်တော်ဟာ စားစရာ။
'ဟင်...အစ်ကိုဘာလုပ်မလို့လည်း?' ပြီးခါနီးမှ ပါးစပ်ကချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ခရေပွင့်ကိုစမ်းပြီး Vaseline သို့မဟုတ် တစ် ခုခုကို ခပ်များများထည့်တာ။ အနံ့တစ်ခုခုရတယ် Vaseline အနံ့လိုပဲ။ အာ...သူ့ဒုံးပျံကြီးကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို တေ့တယ့်......မြတ်စွာ ဘုရား။
'Ouch! Ugh! ရပ်.....ရပ်လိုက်ပါအစ်ကို....နာတယ်ဗျ'
'မနာပါဘူးကွာ၊ မင်းအစမို့ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းဖီးလ်ကောင်းလာမှာပါ။ နောက်ဆို မင်းငါ့ဆောင့်ချက်တွေကို ကြိုက်တောင်ကြိုက် ဦးမယ်....အိုကေတယ်မဟုတ်လား?'
ဘာပြောရမလည်း.... ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ စကားလုံးမရွေးချယ်တတ်တော့ဘူး။ တည်ငြိမ်သော နွေးထွေးစောင့်ရှောက်သောသူက ဒီနေ့ ညတော့ စိတ်အားထက်သန်စွာနှင့် အတင်းအကြပ် သူ့စိတ်ဆန္ဒကို လိုက်လျောစေချင်နေရော။ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပါပဲ လူတစ် ယောက်အပေါ်အမြင်တွေပြောင်းလဲရပါပြီ။ သူ့ရီဝေေ၀မျက်လုံးတွေ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းတွေ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အားအင်တွေကို ကျွန်တော်မရုန်းထွက်နိုင်တော့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သည်းခံစိတ်ထားရုံကလွဲလို့ ဘာများရှိနိုင်ဦးမလဲလေ။
'အာ...အ' သူ့ပစ္စည်းကြီးနဲ့ ပြည့်နေပြီ ကျွန်တော့်ခရေတွင်းဟာ။ နာကျင်မှုကို သည်းခံရတာလောက် ကျွန်တော့်အတွက် ဒုက္ခကြီးတာ မရှိတော့ဘူး။ အဆုံးထိ ဖိကပ်ပြီးသွင်းကာ သူ့တင်ပါးတွေကို ဇကောဝိုင်းနှဲ့နေတာ။ ပြန်ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နှင့် (၅)မိနစ်လောက်သူ လှုပ်ရှားပြီးနောက် သူ့ပစ္စည်းကို ရုတ်တရက် ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ပါးစပ်က ညည်းသံနှင့်အတူ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားပေါ် နွေးကနဲ နွေးကနဲ ပါပဲ အဖြူရည်တွေ။
မသိစိတ်ဆိုတာလေးက ရိပ်မိသိရှိရပါပြီ အစပိုင်းပဲရှိပါသေးလားလို့။ ဒါဟာ နောက်လာမယ့်အကြောင်းအရာများစွာရဲ့ ပဏာမ တေးသံများလား။
နှင်းမှုန်တွေတဖျောက်ဖျောက်ကျသံ ပြီးတော့ ဗိုက်က တဂွီဂွီမြည်ကာ ဆာလောင်လာမှုတွေကြောင့် မနက်စောစောနိုးလာရပါပြီ။ အ...တင်ပါးတွေက နာကျင်နေသလိုပဲ။ လမ်းလျှောက်ရတာ အောင့်တောင့်တောင့်နဲ့။ အိမ်သာတက်တော့ ရေသုံးရာမှာ စပ်လိုက် တာ...ရှီး....။
ကျွန်တော့်အတွက် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးမှုအတတ်တွင်သာမက.....တခြား.....တခြားအရာကိုများ သင်ကြားပေးနေသလားဗျာ။
မနက်စာစားတော့ မီးဖိုချောင်မှာ နှင်းဆီနဲ့တွေ့ရလေ့ရှိတာပုံမှန်။ နှင်းဆီဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ကျွန်တော်နှင့်ရွယ်တူ ၁၈နှစ်လောက် ပဲရှိဦးမယ်။ ကျွန်တော့်ဆို သူမ တော်တော့်ကို ဂရုစိုက်သလိုပဲ။ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေကလည်း ချစ်ခင်နှစ်လိုဟန်။ ဒါပေမဲ့ခက်တာက ချစ်လို့မရဘူး ကြိုက်လို့မရပါဘူး သူမကို။ အဲဒါဟာ ဒီနေ့မနက်မှာ သေချာသွားတယ်။ ရင်မခုန်တာ အမှန်တရားပဲ..။
'ဒါ ကိုဂျစ်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်'
သူမတစ်ခုခု ငံ့လင့်နေသလိုပါ။ ကျွန်တော်စိုက်ခင်းရှိရာကို လှမ်းသွားရင်း လက်ဆောင်ထုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ ၀က်ဝံရုပ်သေးသေးလေးက အသည်းပုံလေးကို ပိုက်လို့ ချစ်စရာ။
မွှေးပျံ့တဲ့ နှင်းဆီခင်းကိုဖြတ်အလာ နှင်းဆီဖူးတွေကို ပိုက်စွပ်ဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ ကိုသူရကို မြင်လိုက်ရသေးတယ်။ ဒီနှင်းဆီတွေက ရေမွှေး နှင်းဆီအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပွင့်အာမသွားအောင် အဖူးအငုံဘ၀ကတည်းက ပိုက်စွပ်ပေးရသတဲ့။ သေချာတောင် မငုံသေးတဲ့ဘ၀မှာ ပိုက်စွပ်ခံရတဲ့ နှင်းဆီမျိုးပါလားနော်။ ကိုသူရကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပုံမှန်ပါပဲ ထူးခြားတဲ့အမူအရာမရှိဘူး။ ကျွန်တော့်အ တွက်သာ သူ့ကိုမြင်တော့ ထိတ်ကနဲ ရင်တွေခုန်လို့။
ထုံးစံအတိုင်း ပျိုးဘောင်တွေဘက်ရောက်တော့ မနေ့ကအသစ်ရောက်တဲ့ ပျိုးပင်ထည့်အိုးလေးတွေကို ရေတွက်ပြီး အလုပ်စဖို့ပြင်ဆင်ချိန် မှာ ဇော်ရှိန်းဆိုတဲ့ တခြားဆိုက်က ဥယျာဉ်မှူးရောက်လာတယ်။ ကိုသူရ မအားလို့ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးဖို့လာတယ်ဆိုပဲ။ သူ့အကြည့်တွေ ဟာ မရိုးသားသလို တစ်ခုခုသိနေတဲ့ပုံ။ တစ်ခြားအကူတွေရှိရဲ့သားနဲက ကျွန်တော့်ကို ထူးပြီးကြပ်မတ်နေသလို ခံစားရတယ်။
ဟူး....စကားပြောရင်း ဟိုပုတ်ဒီကိုင်နှင့် တမင်များလုပ်သလား။ ကျွန်တော်စိတ်ကျဉ်းကြပ်မိတာတော့အမှန်။ ဒါပေမဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသေး တဲ့ ဘ၀ မဟုတ်လား။
'ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို.....ဒီမှာပါ ခရင်းခွက'
'မြေကို ဒီလိုအသာဆွရတာကွ...တစွပ်စွပ်အမြန်မထိုးရဘူး တဖြည်းဖြည်းတစ်ချက်ခြင်း ဟောဒီလို.......'
ကိုသူရများပြောပြလိုက်သလား ကျွန်တော့်အကြောင်း ဒါမှမဟုတ်.......။
ကိုဇော်ရှိန်း ပိုပြီးစနစ်ကျသလိုပဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ပုံရပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက်လုပ် မမှားစေနဲ့ နုရွ မနေနဲ့ဆိုတဲ့ လုပ်ပုံကိုင်နည်းတွေ သူနဲ့ကျမှ ကျွန်တော်ပိုတတ်လာတယ်။ ဟောတစ်ပင်ပြီး တစ်ပင်ပျိုးပင်တွေများ ငွားငွားစွင့်စွင့်။
'ညနေ ငါ့အခန်းဘက်ကိုလာခဲ့ဦး ငဂျစ် မင်းကိုပြောစရာရှိလို့'
အခန်းထဲမှာ ညနေခင်းနေရောင်ကို လှုံရင်းသွားရမလား၊ မသွားရင်ရောရမလား အတွေးဒွိဟဖြစ်ပေါ်မိတာ ရင်ထဲတင်းကြပ်နေရော။ မသွားမှမဖြစ်တာဘဲ...... သူက အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော့်ဆရာမဟုတ်လား။ သွားမယ်........။
ခပ်ဟဟ ဖွင့်ထားတဲ့အခန်းထဲ အသံပြုဝင်သွားတော့ တီဗီကို လှမ်းပိတ်လိုက်ရင်း အခန်းဝကိုလျှောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ခပ်သာသာ ပြုံးရင်း အခန်းတံခါးကို အသေအချာ ပိတ်လိုက်တာ။ ပြတင်းတွေကော လုံလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့......ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ၀ိုင်းသွားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်ဖက်က တံခါးမကို အသေအချာပိတ်ပြီးနောက် သူ့ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့် သူ့လောင်ချာကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြတော့တာ။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ အမျိုးသားပစ္စည်းကိုမြင်ဖူးရတာ ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် အားငယ်သွားမိရသလိုပါ။
'ကဲ....ငါ့ကောင် ဘယ်လိုလည်း ဂွတ်တယ်မဟုတ်လား?'
ကျွန်တော်ဘာမှ တုန့်ပြန်စကားမဆိုမိပါဘူး။ ရှော့ခ်ဖြစ်သွားသလို ကျွန်တော့်နှုတ်က ဆွံ့အသွားရပါတယ်။ သူထင်ထားတာက ကျွန်တော် ကြောက်လန့်ပြီး ငိုကြွေးမယ်လို့လေ။ ပြီးတော့ရုန်းကန်ထွက်ပြေးမလား သူ့လက်အစုံကနေပေါ့။ သူဟာအနိုင်ကျင့်ဖို့ အားသန်သူထင်ပါ ရဲ့။
သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ပခုံးကို ချုပ်ကိုင်ဖိနှိပ်ကာ အောက်ကိုထိုင်စေတယ်။ သူကျွန်တော့်ကို ဘာများလုပ်စေချင်ပါသလဲ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်က ဘာလုပ်ချင်နေတယ်လို့ ထင်မြင်နေသလဲ သူ့အမိန့်အတိုင်း ကျွန်တော်ဒူးထောက်လိုက်ကာ ရှည်လျားတုတ်ခိုင်လှတဲ့ လောင်ချာကြီးကို မရဲတရဲကိုင်ကြည့်မိပါတယ်။ ၇လက်မများကျော်မလားပဲ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းပိုထွားလာတယ်။
အဦးဆုံး ခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုး ပြန်လည်ရှက်ရွှံ့ခံစားမိချိန်မှာ သူ့အသံကြောင့်လန့်သွားရပါတယ်။ 'Cock – suck, boy. Suck it.'
ဒါလုံးဝအသစ်ပါ။ ကိုသူရနဲ့တုန်းက ဒီလိုလုပ်ဖို့ မပြောခဲ့ဖူးဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်နှစ်သက်မယ်ထင်ရဲ့။ သူ့အတံကို အသာကိုင် လျှာနဲ့ အသာတို့တို့ကြည့် မိရရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းကိုငုံစုပ်ပါပြီ။ အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သူ့လက်တွေဟာ balls တွေကိုကိုင်တွယ်ပြပြီး 'ငါ့ balls တွေကို စုပ်ပေးစမ်းကောင်လေး၊ မင်းနားလည်တယ်နော်? အခုစုပ်!' သူ့အသံက ခပ်မာမာနှင့် အမိန့်ပေးတာများ သူ့လိုအင်ကို ကျွန်တော်မငြင်းရဲတဲ့အထိ။
သူ့balls ကို အသာငုံစုပ်ပေးရင်း သူ့ငထွားကိုကြည့်နေမိတာ သူ့ဟာနည်းနည်းများ ပြန်ပျော့သွားသလားမသိ။ ဒါပေမဲ့ သူ့လက်အစုံက သွက်သွက်ကစားရင်း ပြန်မာအောင်လုပ်နေရဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ ဒီလိုဘ၀မျိုးဖြစ်နေရပြီလား......အတွေးဝင်မိသလို.....ငြင်းဆန်ဖို့မလုပ်ချင် တော့ပါဘူး။
သက်သက်အတွေးဝင်မိတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ အတွေ့အကြုံသစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထပ်ပေါင်းထည့်ရတဲ့ အရာသစ်တစ်ခုတိုးခဲ့ပြီပေါ့။ ဘယ်လိုစုပ်ရမလဲ? သူ့ဟာက သန့်ကောသန့်ရှင်းရဲ့လား? ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတာက ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အနံ့တစ်မျိုးရှိတဲ့ ထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားတဲ့ သူ့ငထွားပါ။ တံတွေးကို ရောင်ရမ်း မျိုချမိပါရဲ့။ ပျော့နေတဲ့ သူ့ဟာကြီးခမျာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ကြား တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်မာလာပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနဲ့ရစ်ပတ်၊ အဆုံးထိ ငုံလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်မိရရင်း လူတစ်ယောက် ကျေနပ်အောင် ဘယ်လိုပြုစုရမယ်ဆိုတာ သိသွားရပါပြီ။ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်ရင်ပြည့်များပြည့်သွားမလားဘဲ အခုတောင် ပါးစပ်ကိုကျယ် ကျယ်ဟထားရတာ။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူ့ပစ္စည်းကို စွဲထုတ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်လျှာဖျားပေါ် ဗုံတံခေါက်ပါတော့တယ်။
ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားတဲ့ သူ့လက်အစုံ၊ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတဲ့ သူခြေချောင်းတွေနဲ့အတူ.....အ...အား မလိုင်အပျစ်များစွာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အပြည့်။ အရသာ ငံသလိုလို သူ့ငပဲကိုဆက်ပြီး ကိုင်လိုက်မိပါတယ်။ သူကတော့ ဖီးလ်ပြည့်သွားရပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ မကျေနပ်သေးဘူး ထပ်ပြီး စုပ်ချင်သေးပါရဲ့။
ကိုဇော်ရှိန်းတစ်ယောက် မတတ်တတတ် ကျွန်တော့်အပြုအစုမှာ သူ့လတ်ဆတ်မှုကို ရသွားဟန်ဖြင့် အိပ်ယာပေါ်အသာလှဲလျောင်း နေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် လိင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လျှို့ဝှက်မှုဖြင့်တက်မက်မှုများ ဖြစ်သွားရပြီပေါ့။ ငပဲကိုစုပ်တာ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲ အသွင်းခံရတာတွေဟာ ကျွန်တော့် အာသာဆန္ဒအဖြစ် အမှန်တရားဖြစ်လာရပြီထင်ပါ့။ ကိုသူရနဲ့ ကိုဇော်ရှိန်းဟာ ကျွန်တော့်အိပ်မက်အကြောင်းပြောပြနေသူများ...။
'ဇော်ရှိန်းက ငါ့ကိုပြောတယ် မင်းဟာအတော်အပြုအစုကောင်းတဲ့ကောင်လေးပဲတဲ့။ ငါလည်းအဲဒီလိုထင်ပါတယ်။'
ကိုသူရ တစ်မနက်ခင်းသော အားလပ်ရက် ကျွန်တော့်အခန်းတွင်းမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတူထိုင်နေရင်း မချို့တချို ကျွန်တော့်လက်ရာ ကော်ဖီကို သောက်ကြတုန်းပေါ့။
'ငါတို့နှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုထင်လည်း ငဂျစ်? ငါဆိုလိုတာက မင်းအဲဒါတွေကို ကြိုက်ရဲ့လား မင်းသိလား?.....မင်းဖီးလ်ကောင်းသလို ငါလည်း ဖီလင်ဂွတ်တယ်ဆိုတာ'
ကျွန်တော်တို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နွေးထွေးစွာ စကားအကြာကြီး ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးမှုအတတ် ကျွမ်းကျင်မှုရလာဒ်ကောင်းတွေ ကို သူဥယျာဉ်မှူးကြီးဆီ တင်ပြပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပါသပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲစိုးထင့်နေတာတွေ ကြောက်လန့်တာ တွေဟာ ပျောက်ကွယ်သွားပေါ့ သူ့စကားနှင့်အတူလေ။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ ကိုဇော်ရှိန်းလည်း စကားဝိုင်းထဲ ပါဝင်လာပါရော။
နာရီလက်တံအချို့ကျော်ဖြတ်သွားပြီးနောက် ကိုသူရက တစ်မျိုးဆန်းသစ်လာပါရော။ သုံးယောက်သား အရသာသစ်တစ်ခုခုရှာဖွေကြစို့ တဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက် ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ငြင်ငြင်သာသာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း၊ လည်တိုင်တွေကို အနမ်းဝေပါ တော့တယ်။ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီး ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေ မှေးမှိတ်ထားရာမှ လည်တိုင် ပါးပြင်တွေအပေါ် အနမ်းတစ်ချက်ကျ ရောက်တိုင်း ရှိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ သွေးတွေဆူပွက်မိပါရဲ့။
မျက်လုံးဖွင့်အကြည့်မှာ ကိုသူရကဘောင်းဘီမပါ သူ့ငပဲကို ဂုတ်ကကိုင်ကာ ကိုဇော်ပြုနေသမျှကို ထိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ ကိုဇော့်တစ် ကိုယ်လုံး စူးစမ်းကြည့်မိမှ သူ့ဘော်ဒီ အတော်လှတာကို သိလိုက်ရပေါ့။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး တက်မက်စွာ ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ခါးကိုကိုင်ကာ အသာကုန်းစေပါတော့တယ်။ ခရေ၀အား ချောဆီအများအပြားထည့်လိုက်တော့ သူ့ငထွားကို အဆင်ပြေပြေ လက်ခံဖို့ ကျွန်တော်စိတ်ချသွားရတာပေါ့။ စိတ်ကိုအသာလျော့ထားစဉ်မှာ သူ့ငပဲဟာ တထစ်ထစ်နဲ့ တိုးဝင်လာပါတယ်။ ပါးစပ်ကို အသာ ဟကာ အသက်ရှူရရင်း သူ့ဆောင့်ချက်များကို အားမာန်ပါပါလက်ခံဖြစ်တော့ ကိုသူရလည်း ကြည့်ရင်း မာန်ထလာကာ သူ့ငပဲကို ခပ် သွက်သွက်ကစားနေရဲ့။
ကိုဇော်က သူ့ငထွားကို အရင်းထိဖိကပ်လိုက်ပြီး နှဲ့နေချိန်မှာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲ ကိုသူရရဲ့ ငပဲက လျောကနဲဝင်လာရော။ အရမ်းကိုအလုပ်များပြီး အဲဒီအလုပ်အပေါ်မှာလည်း ကျေနပ်ရပါတယ်။ ပါးစပ်က ငပဲကိုလျှာနဲ့ သရပ်ကာပြုစုရင်း တင်ပါးအစုံကိုခပ်ကော့ ကော့ထားကာ ကိုဇော့်ကို ကျေနပ်စေပါတယ်။
နတ်သမီးပုံပြင်တွေထဲကလို လွင့်မျောနေတဲ့ ဖီလင်ကို ကျွန်တော်ရနေရပါပြီ ခပ်တောင့်တောင့်ယောက်ျားပီပီသသ လူနှစ်ဦးရဲ့ အားမာန်ပါ ပါ တက်မက်မှုများဖြင့် ပြုစုနေသမျှကို ကျွန်တော်ရရှိနေခြင်းလေ။ တစ်ချက်တစ်ချက် ဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့ ကိုဇော့်ကြောင့် ကျွန်တော် သိမ့်ကနဲ ဖြစ်ရသလို ကိုသူရရဲ့ အသွင်းအပြုကြောင့် ဆိမ့်ရပါတယ်။ အံအားသင့်စဖွယ် ဖီလင်တွေကို ရရှိနေစဉ်ခဏ ကိုဇော့်ဆောင့်ချက် တွေ သွက်လာပြီး အသက်ရှူသံတွေ မြန်လာပါပြီ။ ကိုသူရကတော့ ပန်းပန်ဆဲ။ ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ဆောင့်လိုက်ကာ နွေးထွေးသော ခံစားချက်တွေကို တင်ပါးအစုံပေါ်မှာ ခံစားရရှိလိုက်သောခဏ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ပေါ် အနမ်းတွေ လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ နှစ်ယောက် လုံး တစ်ပြိုင်နက်များပြီးမလား ထင်မိပေမဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှ ကျွန်တော့်လျှာဖျားတွေ နှုတ်ခမ်းသားတွေပေါ် ပူနွေးတဲ့အရည်တွေ အများအပြား ချိုသလိုလို အရသာကို ရရှိပါရော။ ကိုဇော်နှင့် မတူ ချိုသလိုလိုပါပဲ။
ဒါဟာလည်း ပထမဆုံးသော threesome အတွေ့အကြုံပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖီလင်မျိုးနောက်ထပ်ရရှိဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေသလိုပဲ။
အခုအချိန်မှာတော့ လူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်လုံးကို ကျွန်တော်ချစ်မိသွားပြီလားမသိပါ။ အံ့အားသင့်ဖွယ် ပျော်ရွှင်မှုရသကို နှစ်ဦးလုံးကပေးစွမ်း ပါတယ်။ ဂရုစိုက်မှုတွေကလည်း တကယ့်အမှန်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာက ကိုသူရမှာ မိန်းမရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ ဒါကြောင့်များ သူဟာ လူတစ်ယောက်စိတ်ဆန္ဒပြည့်ဝ အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိနေနှင့်တာ။ ဟိုတစ်နေ့က ကျွန်တော့်အခန်းကို သူမလာခင် သူ့မိန်းမကို သူလုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူကျွန်တော့်ကို အတွေ့အကြုံသစ်ဆီ ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။
'ငါတို့နှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လား ညီ?'
'ဒါဟာ ငါတို့နှစ်ယောက်အတွက် သီးသန့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ကမ္ဘာလေးပါ'
ကျွန်တော်မှားသလား?.....သူများ ကာမပိုင်လင်ယောက်ျားနှင့် ပတ်သက်နေမိတာ။ မှားများနေသလား? ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ သင့်သလား......ဟင်?
'ဦးဝင်းသူ'...ဥယျာဉ်မှူးကြီး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်တွေ့ပါတယ် ရာသီဥတုကြည်လင်သာယာတဲ့ အင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းမှာပေါ့။ ဘေးမှာလည်း ကိုသူရ ရှိနေရဲ့။
'မင်းအလုပ်ကြိုးစားတယ်၊ ပြီးတော့ အခြေခံစိုက်ပျိုးပြုစုမှုတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီလို့ သူရကပြောတယ်။ ဒီတော့ မင်းကို လစာတိုးပေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်ကွ'
'မင်းသူရဦးစီးတဲ့ နှင်းဆီစိုက်ခင်းဘက်မှာပဲလုပ်မလား? ဒါမှမဟုတ် ငဇော်ဦးစီးတဲ့ ဂန္ဓမာစိုက်ခင်းဘက်ကို သွားမလား? ဒီ့ထက်ပိုပြီး မင်းတိုးတက်တာပေါ့ အသိပညာ'
ဦးဝင်သူရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို မော့ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီလူကြီးဟာ အရပ်ပုပုတုတ်ခိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်။ မျက်ဝန်းများဟာ နွေးထွေးကြင်နာ တတ်ပုံရပါရဲ့။ အဖေ့ မျက်နှာကို ပြန်မြင်ရသလိုပါပဲ။
'ကျွန်တော် ဂန္ဓာမာပန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် ဆရာကြီး'
ကျွန်တော် ဂန္ဓမာခင်းတွေဘက်လှည့်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ နှင်းဆီပန်းလို မမွှေးပျံ့ပေမယ့် ခပ်သင်းသင်းအနံ့တစ်ခုက ဆွဲဆောင်မှုပေးပါ တယ်လေ။ အဖြူရောင်ပွင့်ချပ်လေးတွေ အစိမ်းရင့်ရောင် အရွက်စိမ်းစိမ်းများဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပိုသင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ခြင်္သေ့အစိမ်းရွက်လေးတွေကနေ ဘာတွေများ ပိုရနိုင်သလည်း အတော်အသင့်ဆို လုံလောက်ပြီမဟုတ်လား အခုအတွေးတွေထဲ။
ကျွန်တော့်အခန်းငယ်လေးရဲ့ ပန်းအိုးလေးမှာ ဂန္ဓမာတွေပွင့်ပြီပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေကျွန်တော့်အိပ်ယာအထ ဂန္ဓမာပန်းအိုးလေးကို ငေးမိ စဉ် နံဘေးမှာ ကိုဇော်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီတွေထဲ အမြဲရောက်နေရော။ သူကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းနှစ်သက်နေပါရဲ့။ My God! ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိရပြီပဲ။
နေ့တွေ ညတွေလည်ပတ်နေရာက နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်လာစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဆရာအနေအထားဖြစ်လာရပါပြီ။ ဥယျာဉ်ကြီးထဲ လှည့်လည်မိတဲ့အချိန် ပျိုးခင်းတွေဘက် ကျွန်တော်ရောက်မိတော့ လူငယ်လေးအချို့ ကျွန်တော်ရောက်ခါစကလို မျက်စိလေးကလယ် ကလယ်တွေ့မိပါရဲ့။ သူတို့ကို ကြီးကြပ်သင်ကြား ပေးနေသူက ကိုသူရ။ အဟင်း....
'ငဂျစ်....ငါ့ကောင်...အကိုတို့ threesome လုပ်ခဲ့ဖူးတာမှတ်မိသေးလား?'
'ငါသိတယ် သူမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်'
လေအေးအေးနှင့်အတူ ညမွှေးပန်းရနံ့နဲ့အတူ ကျွန်တော် ကိုဇော်ကိုစောင့်နေရတာ။ ဒေါင်ဒင်နှင့် ည၁၀နာရီကျော်အသွားမှာတော့ ကိုဇော်ရောက်လာတယ် ညမှာ လွင့်တဲ့ ပန်းအကြွေနှင့်အတူပေါ့။ သူမကအတော်လှတာ။ ကျွန်တော့်ထက်တော့ အသက်ကြီးပုံရပါတယ်။ သူဝတ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအတိုင်း။ တင်းကြပ်တဲ့ စကပ်အတိုဟာ တင်သားဝိုင်းဝိုင်းတွေကို ကြပ်စီးထား သလိုပါပဲ။
အိုး.....ကိုဇော် သူမရဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနဲ့ရစ်ဝိုက်ရင်း ကလိနေတယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ရင်သားတစ်ခုကို အသာအ သာအယာ ဖျစ်ညှစ်နေပါရော။ မသိမသာ ကားထားတဲ့ပေါင်ကြားထဲက ခပ်ဟဟ ဂူဝလေးကိုတွေ့တော့ ကျွန်ောတ့်အာခေါင်တွေ ခြောက် သွားသလားမသိ ရေငတ်သလိုပဲ။
သူ့ရင်သားတွေကို ကိုင်မိစဉ်တော့ ကျွန်တော့်သွေးသားတွေ ဆူဝေလာပါပြီ။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် လူပျိုအစစ်ရှိသေးတာပဲမဟုတ်လား။ ဒါကို ပေါင်ကြားထဲက ညီဘွားက မှန်ကန်ကြောင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြပါတယ်။
နံရံက အိတ်ကလေးထဲက Trust ဆိုတဲ့ ကွန်ဒုံးထုပ်လေးကို ယူလိုက်ကာ သူ့ငပဲမှာ ကိုဇော်စွပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ညမွှေးပန်းရဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းကို ပခုံးမှာ အသာထမ်းလိုက်ကာ သူ့ပစ္စည်းကို အသာဂူအောင်းပါတော့တယ်။
ကိုဇော် ကျွန်တော်နှင့်တုန်းကလို မဟုတ်ဘဲ ဆောင့်ချက်ညှောင့်ချက်တွေက မြန်ဆန်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ အိုး...အရှင်လတ်လတ် ဗီဒီယို ထဲက ဟာကို အပြင်မှာမြင်ရသလိုပါပဲ။ သူမဟာလည်း အပေးကောင်း၊ ကိုဇော်ကလည်း အပို့ကောင်း စည်းချက်ညီညီလှုပ်ရှားနေကြတာ။
မိနစ် ၂၀ကျော်လောက်မှာတော့ ကိုဇော့်ဆောင့်ချက်များဟာ ပိုမိုသွက်လာပြီးနောက် ခါးကိုကော့ကာကော့ကာဖြင့် ငြိမ်သက်သွားပါတော့ တယ်။ ကွန်ဒုံးကို အသာချွတ် အမှိုက်ပုံးထဲ အသာထည့်ကာ ပုဆိုးကောက်ဝတ်ပြီးသကာလ အပြင်ခဏထွက်သွားပါတော့တယ်။
'ကောင်လေး....ဘာလုပ်နေတာလည်း ချွတ်လေကွာ မမ မပျင်းချင်ဘူးကွ'
အင်္ကျီတွေကို ချွတ် ဘောင်းဘီတွေကို အသာဆွဲချလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ သူမမျက်နှာနဲ့ တန်းကနဲ။ သူမမျက်လုံးတွေဟာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးခြုံကြည့်ကာ နှစ်သက်သဘောကျသွားတဲ့ဟန်ဖြင့် အရောင်တဖျပ်ဖျပ်တောက်နေပါရော။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖျား မှာခပ်ကော့ကော့ဖြစ်နေတဲ့ ငပဲကိုမြင်သွားချိန်မှာတော့ '၀ိုး.....မင်းကောင်လေးက လှလှချည်လားကွာ'
သူမလက်အစုံနှင့် ငြင်ငြင်သာသာကိုင်တွယ်ပြီး နှုတ်ခမ်းသားတွေကြားအသာထည့်လိုက်စဉ် လျှပ်စစ်နဲ့တို့လိုက်သလို ခံစားရပါတယ်။ သူမဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်ပါလိမ့်။ မကြုံဖူးတဲ့ အရသာကို သူမပေးပါတယ်။ ဒီလိုသာဆို ခက်ရချည်သေး။ တပ်ထွက်ဖြစ်တော့မှာ။ ခဏ အသာဇိမ်ယူပြီးနောက် ကွန်ဒုံးအထုပ်ကိုလှမ်းယူကာ တစ်ခုကို ကျွန်တော့်ညီဘွားမှာ အသာစွပ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်သူမပေါင်ကြား အ သာဝင်ကာ ကျားကြီးရေသောက်မဟုတ်တဲ့ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးလုပ်တာတောင် အပေါက်ချော်နေတော့ သူမက အသာကိုင်ကာ ပစ်စတင် ချိန်ပေးရပါသေးတယ်။
အသာလေးတရစ်ခြင်းသွင်းမိတော့ ကျွန်တော်သဘောကျမိပါ့။ ဖီးလ်က မိုက်တယ်။ သူမအတွင်းကြွက်သားတွေဟာ သန်မာတုန်း။ တ ဖြည်းဖြည်းနှင့် ကျွန်တော်လည်း အရှိနမြှင့်ဆောင့်ချက်တွေတင်ဖြစ်တဲ့အခါ တံခါးမကြီးဆီ မသိမသာကျွန်တော်ကြည့်မိရသေး။ သူ့ ရင် သားတွေ တုန်ခါနေတာ ပြီးတော့ သူမမျက်နှာရဲ့ ခံစားမှုများက ကျွန်တော့်အာရုံကို ပြင်းထန်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။
'ကျွီ' ဆိုတဲ့ တံခါးသံနှင့်အတူ ခြေသံထွက်ပေါ်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားရကာ တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန် သူမရင်ခွင်ထဲ လှဲလျောင်းသွားမိရတာပေါ့။ မြင်လိုက်ရတဲ့ ကိုဇော့်မျက်နှာက ခပ်ပြုံးပြုံး။
နောက်တော့.....'ချက်...ချက်' မြည်နေတဲ့ နာရီလက်တံတွေကိုကြည့်ရင်း ကိုဇော် အကြွေပန်းကို ပြန်ပို့နေတာ စောင့်ရတာ အတော် ကြာမှန်း ရိပ်မိရတယ်။ မြို့ထဲထိများသွားပို့နေရသလားပဲ။ မျက်ခွံများဟာ တဖြည်းဖြည်းလေးလံလာပြီးနောက် ကျွန်တော် ဟန်မဆောင် နိုင်စွာ အိပ်မောကျသွား ပါတယ် မကြာခင်မှာပေါ့။
နေခြည်နွေးနွေးကျရောက်လာမှုကြောင့် ထရံတွေကြားက အလင်းစက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ကိုနိုးထစေပါတယ်။
ဘယ်လောက်တောင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မိသည်မသိ ကျွန်တော်အတော့်ကို လန်းဆန်းနေပါတယ်။
ကိုဇော်ဘယ်အချိန်ကများ ပြန်ရောက်ပါလိမ့် ကျွန်တော် ထချိန်မှာ ရေချိုးခန်းထဲ ရောက်နေပြီ။
ခဏအကြာမျက်နှာသစ်ပြီး အခန်းထဲအရောက် မွှေးပျံ့တဲ့ကော်ဖီရနံ့နှင့်အတူ ကိုဇော်ရောက်လာတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ ၀မ်းသာမှုနှင့် အပြုံးဝေလို့ ဘာကိုဒီလောက် သဘောကျနေပါလိမ့်မလဲ။
ပြတင်းကတစ်ဆင့် ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ပန်းခင်းကြီးထဲ လှမ်းမျှော်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ခပ်သေးသေးလေးဖြစ်သွားရပါတယ်။ လေယူရာ ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ ပန်းပွင့်တွေက အများအပြား။ ဖြူနီဝါပြာစုံလင်လှတာပါ။ ဖြာကျနေတဲ့ နေရောင်ခြည်နှင့်အတူ ရှုမောမဆုံးတဲ့ ပန်းခင်းအ လယ် လူငယ်လေးတွေဝင်ရောက်လာမှုနှင့်အတူ နိုးထကြပါပြီ။ ကော်ဖီကိုလက်စသပ်လိုက်ရင်း အ၀တ်အစားလဲဖို့ အခန်းထဲဝင်ခဲ့စဉ်ခဏ ခုတင်ဘေးက ပန်းအိုးလေးကို လှမ်းကြည့်မိတယ် အိုး....ဂန္ဓမာပန်းတွေမဟုတ် နှင်းဆီပန်းတွေ။
Wrote by Alex Aung (21.2.2010)
Posted by Alex Aung at 11:12 PM No comments:
အိပ်နေတုံးမှာ သုက်ထွက်တာ (၂) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ...
ဟိုမိုဘ၀နဲ့ ဟိုမိုလောကကြီး သာယာပျော်ရွှင်စေချင်